Archive du 20180108
Nandravarava i AVA Traboina i Madagasikara
Atsinanana, Alaotra Mangoro, Analanjirofo, Analamanga, Sofia, Vatovavy Fitovinany, Boeny no faritra tena voa mafy tamin’ny fandalovan’ny rivodoza AVA ny faran’ny herinandro teo. Olona 1 no maty, 3 hafa tsy hita popoka raha ny tatitra navoakan’ny BNGRC omaly alahady. Efa mananika ny 23 000 kosa ireo traboina sy voatery nafindra toerana noho ny fiakaran’ny rano na ny faharavan’ny trano fonenana tamin’ireo faritra voalaza tetsy ambony ireo.
Nosakanana ny fihaonana tany Toliara Atahorana mafy Ravalomanana
Nohetraketrahina indray ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha nanao fitsidihana tany Toliara ny sabotsy lasa teo. Nisy andian’olona nokaramaina manokana hisakana ny fahatongavany tany an-toerana, tao amin’ny seranam-piaramanidina.
Fahaiza-mitarika ara-politika Mendrika indrindra aty Afrika i Ravalomanana
“Faly aho, tena faly fa nofidianareo ho olon'i Afrika 2017 amin’ny lafiny fitarihana politika. Fisaorana mitafotafo no atolotro ho anareo tsy an-kanavaka. Santatry ny fandresentsika sahady izao, homba antsika hatrany anie Andriamanitra”.
Televiziona Malagasy TVM Ampiasaina hivoizana adim-poko ?
Nahasorena ny maro ny nahita ny fampahalalam-baovao navoakan’ny Televiziona Malagasy (TVM) halina. Niniana naparitaka sy novoizina ny vaovao nentina nandotoana sy nanaratsiana ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana, ka nilazana fa tsy nahafaly ny vahoaka tany Toliara ny fahatongavany tany an-toerana.
Antananarivo Ahiana ho vaky i Sisaony sy Ikopa
Efa ao anatin’ny loza mitatao tanteraka Antananarivo ankehitriny raha ny fiakaran’ny rano amin’ny renirano lehibe Sisaony, Imamba, Ikopa manodidina an’Antananarivo, araka ny filazana laharana faha-18 navoakan’ny sampana miandraikitra ny ady amin’ny tondra-drano na ny APIPA omaly alahady 7 janoary tamin’ny 6 ora hariva.
Madagasikara Nopotehana Rivodoza 3 tao anatin’ny 3 taona
Nitondra faisana noho ny rivodoza i Madagasikara tato anatin’ny telo taona, izany hoe nanomboka ny janoary 2015 ka hatramin’ny janoary 2018. Nandalo teto ny 14 hatramin’ny 22 janoary 2015 ny rivodoza Chezda ka 15 no maty ary 80 000 no traboina. Niakatra ny renirano maro manerana ny nosy, maro be ny zavatra simba.
HAFARI Malagasy Toerana telo no efa azony hanorenana trano mora
Roso ny dian’ny fikambanana HAFARI Malagasy entina hanatsarana ny sosialim-bahoaka eto amintsika. Ankoatra ny fanatsarana hatrany ilay tetikasa fifindra-monina eny Soaniedanana PK 67 izay hanomboka ny 15 janoary ho avy izao ary efa misy olona manodidina ny 500 isa miasa, dia asa goavana hotanterahin’ny fikambanana ny fanomezana trano mora ho an’ireo fianakaviana tsy manana eto an-drenivohitra sy ny manodidina